Nhau - Kuongorora pamusoro pekupinza uye kutumira kunze mamiriro eChina indasitiri yezvipfeko mu2020
Senyika hombe yekutengesa mbatya, huwandu hweChina hwekupfeka hwekunze hunodarika mabhiriyoni zana emadhora ekuAmerica, iro rakakura kwazvo kupfuura huwandu hwekupinza nguo. Nekudaro, nekushandurwa kwechimiro chehupfumi cheChina mumakore achangopfuura, indasitiri yezvokupfeka zvishoma nezvishoma yakatenga munguva yakura, uye mhando dzemafirimu dzinowedzeredzwa zvishoma nezvishoma, China yekupfeka zvipfeko uye yekudyara kwekuwedzera iri kudzikira zvishoma nezvishoma. Muna 2018, kukosha kwekutengesa kunze kweChina zvipfeko uye zvishongedzo zvaive 157.812 mabhiriyoni emadhora ekuAmerica, uye mari yekunze yaive 8.261 bhiriyoni emadhora ekuAmerica.
China inyika hombe yekutengesa zvipfeko, asi iyo yekunze uye yekuwedzera kunze kwenyika iri kudzikira zvishoma nezvishoma
Senyika huru yekutengesa mbatya, huwandu hweChina hwekupfeka hwekunze hunodarika mabhiriyoni zana emadhora ekuAmerica, iro rakakura kwazvo kupfuura huwandu hwekupinza nguo. Nekudaro, nekushandurwa kwechimiro chehupfumi cheChina mumakore achangopfuura, indasitiri yezvokupfeka yakapinda zvishoma nezvishoma munguva yakakura. Mushure mekusiyana kwezvigadzirwa kunowedzerwa zvishoma nezvishoma, zvipfeko zveChina zvekupinza uye kunze kwenyika zvinodzikira zvishoma nezvishoma.
Kubva 2014 kusvika 2020, zvipfeko zvekuChina zvekutengesa kunze kwenyika zviri kudzikira zvishoma nezvishoma. Zvinoenderana nehuwandu hweGeneral Administration yetsika, mu2018, huwandu hwekunze hwekupfeka kweChina uye zvishongedzo zvaive 157.812 mabhiriyoni emadhora ekuUS (akashandurwa neavhareji mwero wekutsinhana wemwedzi unoenderana nedhora reUS kuRMB), gore-gore kuderera kwe0,68%; kubva munaNdira kusvika Chivabvu wa2020, huwandu hwekunze hwehembe dzeChina uye zvishongedzo zvaive US $ 51.429 bhiriyoni, kudzikira kwegore-ne-gore kwe7.28%.
Kubva 2014 kusvika 2020, chiyero chekupfeka kweChina chipfeko chakawedzera nekukurumidza. Zvinoenderana nehuwandu hweGeneral Administration yetsika, mu2018, huwandu hwekunze hwekupfeka uye mbatya dzeChina zvaive 8.261 bhiriyoni emadhora ekuUS, kuwedzera kwe14,80%; kubva munaNdira kusvika Kubvumbi wa2020, huwandu hwekunze hwezvipfeko zveChinese nembatya zvaive 2.715 bhiriyoni emadhora ekuUS, iine gore-gore-gore kuwedzera kwe11.41%.
Nzvimbo huru dzekunze kwekutengesa indasitiri yezvipfeko yeChina iEuropean Union, United States, ASEAN neJapan. Muna 2018, huwandu hweChina hwekunze hwekupfeka kuEU hwasvika 33.334 bhiriyoni emadhora ekuUS, ichiteverwa neUnited States neJapan, nesu $ 32.153 bhiriyoni uye US $ 15.539 bhiriyoni zvakateerana. Bhandi rimwe, mugwagwa mumwe, ndiyo nzvimbo huru yekutengesa kunze. Zvinoitika zvemakore achangopfuura ndezvekuti mbatya dzeChina dzinotumirwa kunze kwenyika kuUnited States neJapan dzatangazve kukura, zvichideredza kudzikira kwekutengeserana kweEU, uye kuwedzera huwandu hwekunze kwenyika dzedzimwe nyika padivi pebhanhire nemugwagwa. Muna 2018, kutengeswa kweChina kuenda kuVietnam neMyanmar kwakawedzera neanopfuura makumi mana muzana, nepo kunze kwenyika kuRussia, Hong Kong, China neEuropean Union zvakadzikira ne11.17%, 4.38% uye 0.79% zvichiteerana.